မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံးကားစစ်ဆေးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမယ့် Toyota Aye and Sonsရဲ့ (Assessment service) ၀န်ဆောင်မှ အကြောင်း သင်သိပါသလား? – Myanma Daily
posted on March 20, 2018 at 6:48 pm UTC+8 File: Mizzima
မော်တော်ကားချစ်သူများအတွက် နှစ်သစ်မှာ Toyota Aye and Sons (TTAS) မှသတင်းကောင်းယူဆောင်လာပါပြီ။ မော်တော်ကားစစ်ဆေးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း (Assessment Service) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ TOYOTA အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက တိကျသေချာစွာ စစ်ဆေးပြီးသင့်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ကားကို အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီး ဈေးကွက်ကို ယုံကြည်စွာ ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ကားလောကမူဝါဒများကြောင့် ခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ မည်သည့်ကားအမျိုးအစားကိုမဆို စစ်ဆေးပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုပဲ TTAS ရဲ့ website ထဲဝင်ပြီး စာရင်းသွင်းရက်ချိန်း(booking) ရယူလိုက်ပါ။
ပထမအဆင့် ။ အောက်ဖော်ပြပါ Toyota Aye and Sons Link ကို ၀င်ပါ။
ဒုတိယအဆင့် ။ Sign-up and Log-in ပြုလုပ်ပါ။ (စာရင်းသွင်းပြီးမိမိအကောင့်ကို ၀င်ရောက်ပါ။)
တတိယအဆင့် ။ သင့်ကားအချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးသင်လာရောက်နိုင်မည့် နေ့နှင့် အချိန်ကိုရက်ချိန်း (appointment) ပြုလုပ်ပါ။
စတုတ္ထအဆင့် ။ သင် ရယူထားတဲ့ ရက်ချိန်းအတိုင်းToyota Aye and Sons သို့ လာခဲ့ပါ။
ပဉ္စမအဆင့် ။ စစ်ဆေးချိန် ၁ နာရီခန့် စောင့်ဆိုင်းပြီးသင့်ကားရဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(Grade) နဲ့ ခန့်မှန်းဈေးကွက်ပေါက်ဈေး(Market Value) ကို သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဆေးရာတွင် ကားတစ်စီးရဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်၊ မော်ဒယ်၊ မောင်းနှင်ပြီးအတိုင်းအတာ(kilo) ၊ ကြံခိုင်မှု၊ အပြင်ပိုင်း၊ အတွင်းပိုင်း၊ အင်ဂျင်ပိုင်းနှင့်ထပ်မံထည့်သွင်းထားတဲ့အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများပါမကျန် အကုန်အသေးစိတ်အချက်ပေါင်း (၂၀၀)ကျော်ကိုစစ်ဆေးကာ သင့်ကားရဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(Grade) ကိုသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ကားဈေးကွက်ပေါက်ဈေး(Market value) နှင့်အညီ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမှာပါ။ ဒီထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ကားစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် မြန်မာငွေ (၁၄၀၀၀) ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး TTAS မှပေးအပ်တဲ့ ကားစစ်ဆေးမှုရလာဒ်မှတ်တမ်း (Assessment Result Record) နဲ့အတူ Service Member Card ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ရောင်းချလိုတဲ့ Customer များအနေနဲ့ Market Price အတိုင်းရရှိပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေရန် Toyota Aye and Sons နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအရောင်းစင်တာများမှ တဆင့်ရောင်းချပေးလျက် ရှိပါတယ်။ TTAS Service Member Card ရရှိသွားတဲ့အတွက်လည်း TTAS ရဲ့အခြားသော ၀န်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာ Discounts တွေရရှိနိုင်တော့မှာပါ။ TTAS ရဲ့ Premium Member Card ရှိပြီးသားသူတွေအတွက်ကတော့ ကားစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှ တစ်ကြိမ်အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကားပြောင်းစီးချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်… ရောင်းချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Toyota Aye and Sons (TTAS) မှ ကူညီချိတ်ဆက်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းရှုပ်ခံစရာမလိုဘဲကားဟောင်းကိုရောင်းထုတ်ပြီး TOYOTA ကားအသစ်တစ်စီးပြောင်းစီးနိုင်ဖို့ ကားစစ်ဆေးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း ၀န်ဆောင်မှအတွက် အခုပဲ Toyota Aye and Sons (TTAS) ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတော့။
ကားချစ်သူများ ပျော်ရွှင်သောမိသားစုဘ၀ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Toyota Aye and Sons (TTAS)
ကားစစ်ဆေးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု (Assessment Service) ပြုလုပ်လိုသူများအနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ Link မှတဆင့် Booking ရက်ချိန်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
No. 87(A), ပုလဲကွန်ဒိုအရှေ့ ,ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း , ရန်ကုန်မြို့၊
ဖုန်းနံပါတ် – 09954400950, 09954502206,01-400950,01-502206ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။